अनौठो स्वभाव भएको जिराफ !
आइतबार, २८ आषाढ, २०७७
एजेन्सी । कुनै जिराफ बियर पिउनको लागि सधैं बारमा जान्छ भन्ने कुरा धेरैले विश्वास नगर्न पनि सक्छन् । तर, आज हामी तपाईलाई एक यस्तै सौखिन जिराफको बारेमा बताउन गइरहेका छौं ।
सौखिन मानिसहरु प्रायजसो सप्ताहन्तमा बारमा जान मन पराँउछन् । तर, यदि कुनै जनावरले पनि यस्तै गर्छ भने तपाई यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सवर्ग स्थित लायन्स पार्कमा रहेको पर्डी नामको जिराफ बियर पिउनको लागि सधैं बार धाउने गर्छ । यो जिराफलाई बियर यति धेरै मन पर्छ कि उ सँधै नजिकै रहेको एक बियर बारमा आफ्नो मुड फ्रेस बनाउनको लागि पुग्ने गर्छ ।
जिराफको यस्तो हर्कत देखेर यस बारमा आउने पाहुनाहरु पनि दंग पर्छन् । जिराफ सबैभन्दा पहिले बारमा पुगेपछि नै आफ्नो पिउने र खाने कुरा हेर्ने गर्छ ।
वास्तवमा यो जिराफ सधैं बारमा आउने गरेकोले नै अब पर्यटकहरु पनि धेरै संख्यामा यो बारमा पुग्न थालेका छन् । जसको कारणले यो बारको मालिकले पनि यो २० फिट अग्लो जिराफलाई पर्खेर बस्ने गर्छन् ।
आफ्नो एक निश्चित समयमा बारमा आउने यो जिराफ तब सम्म यस बारमा बस्छ जब सम्म उ ड्रिङ्क गरेपछि खाना खाइभ्याउदैन । बारको मालिक आफै उसको लागि ड्रिङ्क र खाना तयार गरेर बस्ने गर्छन् ।